Sunday May 08, 2022 - 11:27:18 in Wararka by Xarunta Dhexe
XIGASHADA SAWIRKA,HARAMAIN SHARIFAIN
Xilligii Kacbada la weeraray ee la xaday xajarul-Aswadka oo ka mid ah mararkii uu baaqday xajka
Qabsashadii Kacbada ee beddeshay taariikhdii Sacuudiga
Axmed Adan Dagaal (Axmed Safiina) oo ka faalooda taariikhda islaamka ayaa BBC Somali u sheegay: "Wakhtigii Nebigu dhashay beelaha Qureysh shaqada Xaramka way u qaybsanayd".
"Reer Banii Haashim oo uu Nebigu ka dhashay waxay lahaayeen oo ay hayeen furaha ceelka Zamzamka iyo waraabinta xujayda oo loo yaqaanay (Al-Siqaaya). Furaha Kacbadan waxa hayay beesha reer Baniishayba," ayuu yiri.
Wuxuu intaa ku daray: "Furahaasi waxaa hayay ninkii beesha u waynaa oo la odhan jiray Cusmaan ibnu abii-Dalxa. Waxa jirtay qiso dhex martay isaga iyo Nebi Muxamed (nabadgelyo korkiisa ha ahaatee) wakhtigii ay diinta Islaamka cusbayd. Wuxuu Nebigu ka dalbay inuu Kacbada u furo wuuna u diiday, markaas ayuu nabigu ku yidhi 'waxa imaan doonta maalin aan kaa qaado'."
Reerkaas ayaa masuul ka ah waxa loo garanayo 'Sudnah' taa oo micneheedu yahay daryeelka guud ee kacbada iyo furidda iyo xiriddeeda.
Sida dhaqanka ah, furaha waxaa haynaya qofka ugu da'da wayn reerkaas ee Banuu Shaybah.
"Furaha Kacbada waa muhiim, taariikh ahaan iyo diin ahaanba. Wuxuu furaha leeyahay kiish u gaar ah oo la geliyo oo ay hayaan reerkaas iyo Golaha Shuurada," sida uu sheegay Dr Maxamed al-Zulfah oo la hadlay Al-Carabiya.
Al-Zulfah oo ku takhasusay taariikhda Islaamka, wuxuu sheegay in qaabka furaha uu is bedledelo. "Madxaf ku yaalla Turkiga waxaa yaallo 48 fure oo la uruurinayay tan iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta, halka Sacuudiga uu hayo Laba fure oo koobi ah oo dahab laga sameeyay.Qoyskaasi ayaa sidoo kale had iyo jeer ka shaqeeya nadiifinta Kacbada waxaana kacbada la nadiifiyaa laba jeer sanadkii, waxayna labadaasi jeer kala yihiin kowda Bisha Shacbaan iyo 15ka bisha Muxaram.